Lanja kitrokely - Ny fanazaran-tena tsara indrindra azonao atao amin'izy ireo | Bezzia
Susana godoy | 11/01/2022 16:00 | fanatanjahan-tena
Lasa iray amin'ireo kojakoja tadiavina indrindra ny lanjan'ny kitrokely. Toa lasa lamaody izy ireo ary marina fa tena asaina miasa kely kokoa amin'ny ao anaty tongotra izy ireo, maneno azy ireo na manatsara ny tanjany sy ny maro hafa. Satria hanampy ezaka bebe kokoa amin'ny hetsika ataontsika izy ireo. Tandremo anefa fa tokony hitandrina hatrany amin’ny lanja apetrakao amin’izy ireny ianao mba tsy hisian’ny ratra.
Ny marina dia tena azo ampiharina izy ireo ary miaraka amin'izy ireo dia afaka manao fanatanjahan-tena ao an-trano ianao, mora. Tsy voalaza izy ireo rehefa miresaka momba ny discipline aerobic Fantatsika rehetra hoe manao ahoana ny fandehanana mihazakazaka. Noho izany, raha miloka amin'ireo lanja ireo ianao, dia tsy maintsy manao fahazarana toy ny etsy ambany ihany ianao ary hanomboka hahita vokatra tsara haingana kokoa noho ny nantenainao.
1 Ny lanjan'ny kitrokely: daka glute
2 Miakatra ny tongotra
3 Squat Bulgarian
4 Ny tongotra mihinjitra
Ny lanjan'ny kitrokely: daka glute
Ny iray amin'ireo fanazaran-tena voalohany azontsika atao dia ity. Izany no atao hoe glute daka satria hanomboka, hanosika ny tongotra iray toy ny daka. Mazava ho azy fa hanomboka amin'ny toeran'ny quadruped isika, mitazona ny tenantsika amin'ny felatana amin'ny tany, ny sandry mihinjitra ary ny lamosina mahitsy. Mikasika ny tany ny lohalika ary araka ny voalazantsika dia tsy maintsy atsipintsika ny tongotra iray ary avy eo hifindra amin'ny ilany. Tsarovy fa rehefa aforitrao indray na rehefa alainao dia azonao entina eo amin’ny tratranao mba haninjitra azy indray. Manaova famerimberenana maromaro isaky ny tongotra.
Miakatra ny tongotra
Marina fa misy karazany hafa ny fanazaran-tena toy izany. Azonao atao ny mitsangana, miankina amin'ny rindrina na mandry fotsiny. Raha misafidy ity safidy farany ity ianao dia tsy maintsy manao izany Mandry amin'ny ilany iray ary tohano amin'ny tany ny vatanao, ampio ny sandrinao hampitony ny tenanao. Fotoana hananganana ny tongotra izao mifanohitra, mba hidina moramora avy eo. Toy ny tamin'ny fanazaran-tena teo aloha dia mety ny manao famerimberenana maromaro ary avy eo manova ny lafiny. Raha mitsangana ianao dia mila mitandrina amin'ny andilanao sy ny vatanao mba tsy hihetsika. Noho izany, hihazona toerana mahitsy ianao ary hanasaraka ny tongotra izay iasanao amin'ny lafiny iray, fa tsy mamindra ny faritra hafa amin'ny vatanao araka ny voalazanay.
Mitsangàna seza amin'ny rindrina mba hihazonana azy tsara. Avereno any aminy izao ny lamosinao ary tohano ny tampon'ny tongotrao, apetraho eo amin'ny seza ny tongotrao. Mahitsy ny vatana ary ny tongotra ilany, izay misy ny lanjany koa. Hanombohana amin'ny squat dia tsy maintsy manenjana ny tongotra izay nohenjana fa tsy ny lohalika mihoatra ny rantsan-tongotra.. Rehefa nanao push-up maromaro tamin'ny tongotra iray ianao dia tokony hifindra amin'ny iray hafa.
Ny tongotra mihinjitra
Ny iray amin'ireo safidy tsotra indrindra ananantsika dia ity. Mandry fotsiny amin'ny tsihy eo an-damosinay izahay. Miaraka amin'ny lanja eo amin'ny kitrokely, dia handohalika ny lohalika mba hahatonga ny zoro 90º.. Amin'izao fotoana izao dia mila maninjitra ny tongotra roa isika mba hamerenana azy ireo indray. Azo antoka fa amin'ny voalohany dia handany vola kely ianao saingy afaka manao famerimberenana kely kokoa.
Tsy afaka nandà ny fahafahana nanao ny sasany izahay sit-up miaraka amin'ny lanjan'ny kitrokely. Izy ireo dia iray amin'ireo hevitra lehibe mba hamenoana kely ny tongotra sy hanamafisana azy ireo rehefa manao toy izany koa amin'ny kibo. Noho izany, rehefa mandry toy ny tamin'ny fanazaran-tena teo aloha, dia manenjana ny tongotra indray amin'ny zoro 90º. Fotoana izao hamelana azy ireo ho ambony ary tsy maintsy manao toy izany koa amin'ny vatana. Tsarovy fa tsy misintona ny tenda na oviana na oviana ny tanana ary tsy hiezaka handroso isika, fa ny vatana no ho axis amin'ny hetsika voalaza. Fomba fanao tsara hanombohana ny fiofananao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » fanatanjahan-tena » Fanatanjahan-tena atao amin'ny lanjan'ny kitrokely
Fantaro ny fika hamadihana ny sakafo rehetra ho fandoroana tavy